आज अकस्मात बेल्जियमको यात्रा :: NepalPlus
आज अकस्मात बेल्जियम पुगिँदै छ । नेपाल आदिबासि जनजाति महासंघले यहाँको लुभेन शहरमा दिउँसो १२ बजेबाट राखेको राजनितिक अन्तर्क्रियामा सहभागि होइन्छ । त्यसपछि आङकाजी शेर्पासित केहि प्रश्न तेसार्नु छ । संघिय समाजवादी पार्टीले कस्तो नेपालको परिकल्पना गरेको छ ? कसरि अहिलेको राजनितिक निकास निस्कन्छ । कसरि हाम्रा तमाम बिभेदहरु अन्त हुने सोचेको छ ? के छ निति ? कस्ता छन् योजना ? संघिय समाजवादी पार्टी जनजातिका माग मात्रै राखेर जातिय राजनिति गर्ने हो कि समग्र नेपालको नेत्रित्व गर्ने हो ?
एक जना आमा हुनुहुन्छ । करिब ६२ वर्षे । अहिलेपनि उहाँ बेल्जियमको एक रेस्टुरेन्टमा बिहानै काममा पुग्नुहुन्छ । उहाँको साहस, आँट र उत्साह अनि काम प्रतिको लगाव देख्दा अचम्म लाग्छ । युरोपमा नेपालीका कथा ब्यथा समेटेर हामीले बनाउँदै गरेको डकुमेन्ट्रीका मेरा सहकर्मी साथी उज्ज्वल केसी र म भएर आमैसित यो पटक भलाकुसारि गर्ने छौं ।
संघिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष, शालिन र स्वच्छ ब्यक्तित्व भनेर चिनिएका अशोक राईसित भेट हुन्छ । उहाँसित त हामीले पेरिसमा अन्तर्क्रिया नै राख्दै छौं मार्च १० तारिख आइतवार । आज साँझ उहाँसित भेटेर सार्वजनिक गरिने छ । अनि नेपालीका कथा ब्यथा, गार्हा साह्रा, दुख, पीड र बिदेशमा तिनका भोगाईका रामकहानी सुनाउँदै हुनुहुन्छ केहि साथीहरुले । भिन्न खाले लेखनका लागि मैले यस्ता केहि कथा सुनाउन साथीहरुलाई आग्रह गरेको छु । बेल्जियम जानुको मेरो मूल उद्देश्यनै यहि हो ।
थारु खाना खुवाउँछु भनेर साथी बडाका थारुको निम्तो छ । आहा ! यो त छोड्ने कुरै भएन । किनभने बाल्यकालमा थारुहरुसितै हुर्के बढेको । घुँगी र माछा, कुखुराको मासु र चिचर, तिनका मौलिक रोटी र अचार । माछा र मासुका अन्य स्वादिला परिकार चाख नपाएको निकै भो । यो पटक थारु खानाले त्यहि वाल्यकालको संझना दिलाउने छ । थारु भाषा बोल्न नपाएको निकै भो । त्यसको धितपनि पक्कै मर्ने छ केहि हदसम्म ।
युरोप भरि भएको दोहोरी लोक भाकामा प्रतिस्पर्धा गरेर प्रथम भएका कूल मगरको गित सुन्न उत्तिकै मन छ । लोक दोहोरी मेरोपनि सर्वाधिक लोकप्रिय हो । सानोमा लुक्दै र भाग्दै दोहोरी गाउँने ठाउँमा पुगिन्थ्यो । अहिलेसम्म लोक गित र न्रित्यकै स्वादले अरुलाई उछिन्न दिएको छैन ।
सकेसम्म बेल्जियममा भएका कार्यक्रमबारे सकेको लेख्ने छु । त्यहाँ नेपाली समूदाय ठूलो हुनाले जता गएपनि केहि न केहि नयाँ भेटिन्छ । यस्सो सडकमा निस्केपछि नेपालीहरुसित जम्काभेट हुन्छ । यात नेपालीहरु गफ्फिँदै आफुलाई नौलो लाग्ने केहि प्रसंगमा गफ्फिँदै हिँडेका भेटिन्छ । सडक दायाँ बायाँ यस्सो पसलतिर हेरे कुनै न कुनै नेपाली काम गरेको, ब्यापारमा तल्लिन रहेको देखिन्छ । यो हिसावले बेल्जियम लेख्नेका लागि खानीपनि हो ।
सकेसम्म केहि पत्रकार साथीहरुसित कतै सामूहिक भेटघाट मिलाउने प्रयासपनि भैरहेको छ । त्यसकालागि उपयुक्त ठाउँ मिल्नुपनि पर्‍यो । डाक्टरले आराम नपुगेको भनेर पटक पटक भनेकाले सकेसम्म यो पटकको बेल्जियम यात्रा धपेडीरहित बनाउने मनशाय छ ।